Jumlada Shiinaha Alpine Shaaha Cagaaran Shaaha Biluochun Soo -saaraha Shaaha iyo Bixiyaha | Maokun
Shaaha Alpine Shaaha Cagaaran Shaaha Biluochun
Shaaha Biluochun wuxuu caan ku ahaa bilawgii boqortooyooyinkii Sui iyo Tang, oo leh taariikh ka badan kun. Waa mid ka mid ah shaaha caanka ku ah dalkeena waxaana iska leh shaaha cagaaran. Halyeeygu wuxuu leeyahay in Kangxi Emperor of the Qing Dynasty uu booqday Suzhou ee koonfurta wuxuuna u bixiyay magaca "Biluochun". Iyada oo ay ugu wacan tahay deegaanka juqraafi ahaan gaarka ah ee Buurta Dongting, ubaxyadu si joogto ah ayay u socdaan xilliyada oo dhan, oo geedaha shaaha iyo geedo midho leh ayaa lagu beeray dhexdooda, sidaa darteed shaaha Biluochun wuxuu leeyahay udgoon ubax gaar ah.
Biluochun asal ahaan
Biluochun waa shaah caan ah oo caan ka ah Shiinaha, kana mid ah tobanka shaah ee ugu sarreeya Shiinaha, oo ka tirsan qaybta shaaha cagaaran, oo leh taariikh ka badan 1,000 sano. Biluochun waxaa lagu soo saaraa Buuraha Bariga Dongting iyo Buuraha Galbeedka Dongting (hadda Degmada Wuzhong, Suzhou) ee Taihu Lake, Degmada Wu, Magaalada Suzhou, Gobolka Jiangsu, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu yeeraa “Dongting Biluochun”.
Habka wax soo saarka Biluochun
Shaaha Dongting Biluochun wuxuu leeyahay xirfado wax -soo -saar iyo wax -soo -saar aad u fiican, soo -qaadistiisuna waxay leedahay saddex sifo: mid waa in hore loo soo qaataa, tan kalena waa in si jilicsan loo soo xulo, tan saddexaadna waa in si nadiif ah loo qaado. Sannad kasta, waxaa laga qodaa agagaarka dhul -gariirka oo roobku wuu dhammaadaa. Laga soo bilaabo sinnaanta dhulka ilaa xilligii Qingming, tayada shaaha kahor boqortooyadii Ming waa tan ugu qaalisan. Sida caadiga ah, hal buro iyo hal caleen ayaa la qaadaa. Waxyaabaha cayriin ee dhererka burooyinku waa 1.6-2.0 cm. Duubka duudduuban ee caleenta leh wuxuu la mid yahay carrabka shimbiraha, oo loo yaqaan “carrabka”. Waxay qaadataa qiyaastii 68,000-74,000 burooyinkeeda si loo shiilo 500 garaam oo ah Biluochun oo heer sare ah. Taariikh ahaan Waxaa jiri jiray ilaa 90,000 oo ubbooyin ah 500 garaam oo shaah qallalan ah, oo muujinaya jilicsanaanta shaaha iyo qoto -dheeraanta aan caadiga ahayn ee qaadista. Caleemaha curdanka ah iyo caleemaha waxay hodan ku yihiin amino acids iyo polyphenols shaaha.
Hore: Shaaha Cagaaran ee Caanka ah ee Shiinaha Pingyang Huangtang Shaaha Cagaaran
Xiga: Shaah cagaaran Buddha weyn 2021 shaah cusub
Shaah Cagaaran Iyo Malab
Laydhka Shaaha Cagaaran
Shaah Cagaaran Cunaha Xanuunka
Jasmine Green Shaaha
Caleenta Dabacsan Shaah Cagaaran
Budada Shaaha Cagaaran ee Matcha
Shaaha Cagaaran ee Dabiiciga ah
Shaah Cagaaran Salada
Bilada Dahabka Huiming Jin Jiang Hui Ming Shaaha
Shaaha Daanyeerka Lacagta ee Songyang Shaaha Shiinaha Chazhidao
Huang Shan Mao Feng Shaaha Cagaaran ee Shiinaha Shaaha Xiisaha Leh
DuYun MaoJian shaaha dabacsan ee Shiinaha